Like & Subscribe လေးနှိပ်သွားတာကသင့်အတွက်ဘာမှအပန်းမကြီးပေမယ့်
ကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတိယChannelလေးကိုလည်း အားပေးလို့ရပါတယ် –
#PaingSharing #ElonMusk #Tesla #China #တရုတ်
စိတ်၀င်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကို Videoအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး ကျွန်တော်ကိုပိုင် PaingSharingမှအခမဲ့မျှဝေပေးပါတယ်။
💬 Feedback တွေအကုန်လုံးကိုလည်းတစ်ခုမကျန် ကျွန်တော်အကုန်ဖတ်နေတာမို့ Movies တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးကောင်းခြင်းဆိုးခြင်း အကြံပြုချင်တာတွေအားလုံးကိုရေးသွားလို့ရပါတယ်၊၊
Video အသစ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Behind The Scenes, Replace, အမြည်းတွေအတွက် အောက်မှာ Followထားလို့လည်းရပါတယ်၊၊
📸 Instagram: PaingSharing//
🐦 Twitter: PaingSharing//
📘 Fb: PaingSharing//
🎶 TikTok: PaingSharing//
See also Dum Biryani (HD) (Biriyani) - South Superhit Action Thriller Movie |Karthi, Hansika Motwani, Premji
Music: On the Tip – Jingle Punks
All supplies in these movies are used for academic functions and fall inside the pointers of honest use. No copyright infringement is meant. If you’re or characterize the copyright proprietor of supplies used on this video and have an issue with the usage of stated materials, please contact me by way of myemail within the “about” web page on my channel.
See also sauth new movie 2020 hindi dubbed,goldmines telefllms,sai pallavi movies hindi dubbed
Categories Yt News Tags China, Elon, elon musk, Musk, Paing, Paing Sharing, Sharing, tesla, တရတမဒကခရကနတ, တရအဖစအပက, တရုတ်, န Post navigation
How to makea"Instagram Video Downloader" app | Kodular | Mk google Tips
18 thoughts on “တရုတ်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ Elon Musk နဲ့ Tesla တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်”
ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရတော့ တရုတ်ကိုဘယ်တော့မှယုံစားလို့မရတာပါဘဲ စီးပွားနဲ့ပါတ်သက်ရင် အရမ်းဉာဏ္ဍ်များတတ်တာတရုတ်ရဲ့အကျင့်ဘဲ
အဲ့လိုဘဲ မာစတာ Xi က 😂
Htein Lin aung
twitter အကြောင်လေးလဲ တင်ဆက်ပေးပါ
Tesla ဗမာ ငါပါနသ၍ ဘယ်တော့ ဒုက္ခမရောက်ဘူး တရုတ်ကိုယ်တိုင်းကပြန်ယူမယ် စီးပွားရေးအမြင်ရှိရင်
မိုက်ပါတယ် တရုတ်က Copy men တွေလေ
Zaw Ko Min Khant
အကို ခုလို အထွေထွေ ဗဟုသုတတွေကို မျှဝေပေးတာ အာကျတယ်ဗျာ။အကို ခုလို အရာတွေကို googleမှာ ဘယ်လို့ရှာမလည်းဗျ။🤗🤗🤗
Hlyan Htet Aung
Laptop notebook တွေအကြောင်း video ‌လုပ်ပေးပါ
Myint Sa Phone
China wants to steal Tesla technology, after that they got what they wanted, they kid out Tesla. China is like that. We don’t trust them.
မသိရင် တယောက်နဲ့တယောက်ချနေသလို ပဲ တကယ်က သာမန်အဖြစ်အပျက်လေးပါ win win situationနဲ့သွားနေတာပဲ